Nandeha tany Aostralia ny lamasinina tsy voafidy - RayHaber
[13 / 10 / 2019] Ankara Sivas YHT Tsipika manakaiky ny fiafarana! ..	Ankara 06
[13 / 10 / 2019] Iray amin'ireo fomba fitaterana azo antoka indrindra	16 Bursa
[13 / 10 / 2019] Fiaran-dalamby Hyperloop Tokony hosokafana mandra-2040	1 America
[12 / 10 / 2019] Torkia-Polonina Trade Fifandraisana sy ny fampiasam-bola Rail System	48 Polonina
[12 / 10 / 2019] Airports ivelan'ny-dalana, Number ny mpandeha nandalo ny volana fahasivy Torkia Mponina	Ankara 06
[12 / 10 / 2019] Ny fe-potoana fampangatsiam-behivavy IETT dia mifarana hatramin'ny Oktobra 15	34 Istanbul
[12 / 10 / 2019] EGO hividianana mpamily fiara mpamily	Ankara 06
[12 / 10 / 2019] Fizarana TCDD avy amin'ny reny	59 Corlu
[12 / 10 / 2019] Nisokatra ny tranomboky ny seranam-piaramanidina Istanbul	34 Istanbul
[12 / 10 / 2019] Ny mpitsabo aretin-tsaina dia tokony ho mpamily metrobus any Istanbul	34 Istanbul
HomeRailwayIntercity Railway SystemsNy fiaran-dalamby tsy misy entana dia miala avy any Aostralia
Ny fiaran-dalamby tsy misy entana dia miala avy any Aostralia
21 / 09 / 2018 Levent Ozen Intercity Railway Systems, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, OSEANIA 0
fiarandalamby yuk tsy misy olona any Aostralia
Tany Devonport, any Aostralia, ny fiaran-dalan'ny fitaterana an-tsambo dia tsy nahitana fanaraha-maso, ka nahatonga ny loza mety hitranga.
Araka ny filazan'ny polisin'i Tasmaniana, ny fiarandalamby tsy misy entana dia tsy afa-mifehy ary azo saziana eo akaikin'ny Devonport Harbor amin'ny fanilihana tsy ara-dalàna ny mety ho loza mety hitranga.
Nolazain'ny polisy mpitsabo fa i Stuart Wilkinson no nanafika ny fiarandalamby navoakan'ny fiaramanidina, ny polisy masoivoho mpitandro filaminana dia nanamafy ny alahelony nandritra ny minitra maromaro ny polisy, nampahafantatra ny vahoaka ny loza ateraky ny faritra.
Wilkinson, '' Mazava tsara ny fotoana. Ny fiaran-dalamby dia nivezivezy tamin'i Devonport, ary ilaina ny mampahafantatra amin'ireo mponina fa nihetsika tao amin'io lamasinina io ny lamasinina. Indrisy fa vehivavy roa, ny iray tamin'izy ireo nandeha teny an-dalana, naratra tamin'ny làkana natsipy tao anaty fiara.
Fitaterana an-dalamby tao amin'ny lalamby Adana nakatona ho an'ny fitaterana 30 / 01 / 2014 Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby dia niharan-doza avy tao amin'ny Railway Adana Closed to Transportation: Noho ny fiaran-dalamby fitaterana akaikin'ny distrikan'i Karaisalı Adana, ny làzany dia mihidy ho an'ny fitaterana. Voasakatona ho an'ny fitaterana ny lalamby noho ny fihazakazaky ny fiaran-dalamby fitaterana an-dalamby ao Adana ao Karaisalı. Ireo mpandeha 600 tao anaty fiarandalamby fiarandalamby, ny Train Station Pozanti dia nalefa tamin'ny fiarabe samy hafa tany Adana. Tamin'ny vanim-potoanan'ny 13.00, nisy ny fiarandalamby fiaran-dalamby, izay teo amin'ny tsipika làlan'i Pozantı-Yenice, dia nogadraina tao amin'ny tanànan'i Bucak any amin'ny distrikan'i Karaisalı. Tsy nisy olona maty na naratra. Nihidy ny lalamby ho an'ny fitateram-bahoaka niaraka tamin'ny sisin'ny sarety nisy teo am-pototr'ilay boaty.
Ny fiaran-dalamby dia nidina tany Kars 29 / 07 / 2014 Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby nogadraina tao Kars: Tany amin'ny distrikan'i Sarıkamış, nihazakazaka ny sarin'ny 3 tamin'ny lamasinina fitaterana entana. Araka ny vaovao voaray, ny sarin'ny 3 amin'ny fiaran-dalamby avy ao Erzurum ka hatrany Kars, dia nialokaloka tao amin'ny toerana Acısu noho ny antony tsy fantatra. Fahavoazana vokatry ny familiana ny fiara 3 voapetaka amin'ny laisoa sy vy. Nakatona ny làlan-dalan'i Erzurum-Kars noho ny loza. Ny asa dia nanokatra indray ny lalana. Mandritra izany fotoana izany, ny toeram-pitsangatsanganana an'i Ankara-Kars East Express teo anelanelan'ny Erzurum dia notazonina am-ponja, navela hiditra tao amin'ny bus ny mpandeha.
Fiaran-dalamby ho an'ny fiaramanidina arabo 22 / 12 / 2014 Ny fiaran-dalan'ny fiara mpitatitra entana dia nialokaloka: Nianjera ny fiarandalin'ny serfa-mpivarotra entona entana avy amin'ny distrikan'i Divriği ao Sivas mankany amin'ny distrikan'i Aşkale ao Erzurum. Na dia tsy nisy naratra tamin'ilay loza aza, dia nijanona ny serivisy fiarandalamby. Ny laharana 01.30 dia nitranga teo akaikin'ny distrikan'i Bagistaş İliç distrikan'i Erzincan. Ny fiara fitaterana 45326 miaraka amin'ny laharana 12 eo ambany fitarihan'ilay injeniera İlyas Aslan, nitondra ny arina nankany amin'ny distrikan'i Aşkale ao Eruzurm avy ao amin'ny distrikan'i Divrigi ao Sivas, dia nanala sarety roa. Nitazona ny lozam-piaramanidina tao Erzurum-Erzincan noho ny loza, navotsotra ny làlana indray hanokatra ny asa. Etsy ankilany, Kars-Istanbul sy 41409 dia manisa ny laharana 11410 laharana Doğu
Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby dia niharan-doza tao Düziçi (Video) 01 / 01 / 2016 Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby dia nidina tao Düziçi: Tao amin'ny distrikan'i Düziçi ao Osmaniye, ny sarin'ny fiara 4 an'ny fiarandalamby entona dia nailika sy nipoaka. Tsy nisy olona maty na naratra tamin'ilay loza. Ny loza dia nitranga omaly tany amin'ny laharana 20.00 laharana Akçakoyunlu Village Yarbaşı Bridge Bridge tany amin'ny distrika. Nanamboatra ny lalamby ho an'ny fanjakana i 63059 Sefer, ny fiaran-dalamby mitondra fiara 49 eo ambany fitarihan'i Harun Kuşçu, injeniera, dia nandeha avy eo amin'ny làlan'i Islahiye Fevzi Pasha mankany amin'ny distrikan'i Iskenderun, raha nivoaka ny fiarandalamby 24 noho ny fisarahana tao anaty fiara. Ny sarety enta-madinika 4 taorian'ny fisehoan-javatra dia ny fiara 24 tsy misy fangarony any amin'ny tobin'i Mamure ...
Ny fiaran-dalamby dia nidina tany Sivas 11 / 01 / 2016 Voaroba ny fiaran-dalamby ao Sivas. Ny sambo 3 ao amin'ny fiaran-dalamby ao amin'ny distrikan'i Kangal ao Sivas dia voavaha noho ny lalamby Sivas-Malatya. Araka ny vaovao voaray, ny fiaramanidina 43303 voalohany an'ny fiarandalamby 3, izay mitondra ny vy avy ao Malatya mankany amin'ny distrikan'i Divriği ao Sivas, dia migadra ao an-tanànan'i Kalkım noho ny antony tsy fantatra. Nitranga tamin'ny fiara noho ny loza ny fahavoazana, nikatona ho an'ny fitaterana ny seranam-piaramanidina Sivas-Malatya. Nanokatra indray ny lalana ny asa
Fanamarihana Tender: Fanamafisana ny tonelina 1 eo anelanelan'ny Ulukışla-Yenice
Oktobra 14 @ 10: 00 - 11: 00
Oktobra 15 @ 10: 00 - 11: 00
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Fanamboarana ny lalamby lalamby lalamby any Irmak Zonguldak Line Km: 166 + 900
Oktobra 15 @ 10: 30 - 11: 30
Ny faharetan'ny bisikileta dia nanomboka tao SAMULAŞ
Fanaraha-maso hentitra avy amin'ny IMM ho an'ny serivisy
Ankara Sivas YHT Tsipika manakaiky ny fiafarana! ..
Iray amin'ireo fomba fitaterana azo antoka indrindra
Torkia Italia Rail Fampiasam-bola sy ny varotra Fifandraisana
Tiorkia fitsapana an-toerana voalohany ny tetika Kapadokia Hot Air Balloon Flight
Torkia-Polonina Trade Fifandraisana sy ny fampiasam-bola Rail System
Tetikasa fahitana BTSO Fihaonan'ny haavon'ny avo GUHEM
EGO hividianana mpamily fiara mpamily
Minisitry ny Turhan: 'Azontsika atao ny mamantatra ireo sambo vita piraty rehetra amin'ny alàlan'ny satelita'
Yenikent Ayaş Road dia maika
Fizarana TCDD avy amin'ny reny
Ny mpitsabo aretin-tsaina dia tokony ho mpamily metrobus any Istanbul
Fitomboana fanampiny 20 Million TL mitombo amin'ny SAMULAŞ nolalovan'ny vaomiera
Ny asa vita haingana ho an'ny tetikasa Amasya Nostalgic Tram
Avy any Moskoa ka hatrany St. Petersburg amin'ny lamasinina mankany 2
Fanitarana ny tetik'asa Line Başkentray
Ny fivezivezena amin'ny làlan-jotra mankany amin'ny normalize ao Mürselpaşa
Ny fiara fiakarana haingam-pandeha avo lenta sy ny lalamby dia tokony hamokatra any TÜLOMSAŞ
Alao ny tombontsoa handinihana ireo vokatra samihafa an'arivony irery 4 isan'andro amin'ny ISAF! ..
Androany ao amin'ny Tantara: 12 Oktobra Banky Maritime 1957 ao amin'ny vahinin'i Haliç Tarih
Fampandrenesana ny Tender: Fanomanana ny Kajy miady amin'ny otrikaika sy ny fanamarinana ho an'ny fananana any amin'ny gara Erzincan
Oktobra 15 @ 14: 00 - 15: 00
Fampandrenesana Tender: TCDD İzmir Port Quay sy famenoana averina amin'ny laoniny
Oktobra 16 @ 10: 00 - 11: 00
Fanamarihana Tender: TCDD İzmir Port Quay ary Ffeno averin-dàlana
Fampandrenesana Tender: Fampandehanana ny Bayındır, Tyro ary Stationdemiş Station Lalana mankany amin'ny rafitry ny Electrification sy Signalization
Fanamarihana Tender: Fanamafisana ny tonelina 37 eo anelanelan'ny Ulukışla-Yenice
Fampandrenesana Tender: Haydarpaşa Ankara Line Km: 392 + 742 - 395 + 700 Slope Arrangement
Oktobra 16 @ 10: 30 - 11: 30
Fanamarihana amin'ny alàlan'ny fanangonam-bokatra: Fampindramam-bola amin'ny serivisy TCDD
Oktobra 16 @ 14: 30 - 15: 00
Tram-basy fitobolam-bidy mitobaka any amin'ny Kayseri
Escalator sy Elevator mankany ambanivohondran'i Nazilli Pedestrian
Fanamboarana lalam-be ao amin'ny tsipika Kurtalan ao Diyarbakır
Biçerova Trano fitobiana Station ary Menemen Station Fanamboarana gorodona fananganana rihana
Fitaterana an-dalamby tao amin'ny lalamby Adana nakatona ho an'ny fitaterana
Ny fiaran-dalamby dia nidina tany Kars
Fiaran-dalamby ho an'ny fiaramanidina arabo
Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby dia niharan-doza tao Düziçi (Video)
Ny fiaran-dalamby dia nidina tany Sivas
Ny fiaran-dalambon'ny fiara fitaterana ao Zonguldak
Fandefasana entana avy any Yozgat
Ny fiaran-dalambon'ny fiarandalamby nogadraina tany Mexico 5 dia maty
Androany amin'ny tantara: 11 Oktobra 1872 Rumeli lalamby ...
Androany amin'ny tantara: 10 Oktobra 2016 Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro ...
News Archive Safidio ny volana Oktobra 2019 (214) September 2019 (555) August 2019 (508) Jolay 2019 (634) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (427) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1077) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (906) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1168) Oktobra 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) Jolay 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (12) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)
163 TCDD. Fankalazana nankalazain'ny Fifaliana tao Afyonkarahisar
163.Ny hafanam-po tao amin'ny gara Ankara
Torkia dia nanarona avy ao amin'ny China Railway Express
Ny fampiasan'ny YHT dia hitombo miaraka amin'ny fametrahana YHT vaovao amin'ny 2020